ပန်းကန်များနှင့်ဘောင် filter ကိုစာနယ်ဇင်း China Manufacturer
မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဟော့ပြား Filter ကိုစာနယ်ဇင်း,မြင့်မားသောစွမ်းရည်စက်မှု Filter ကိုစာနယ်ဇင်း,အရည်အစိုင်အခဲခြား
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဟော့ပြား Filter ကိုစာနယ်ဇင်း,မြင့်မားသောစွမ်းရည်စက်မှု Filter ကိုစာနယ်ဇင်း,အရည်အစိုင်အခဲခြား
Home > ထုတ်ကုန်များ > filter စာနယ်ဇင်း > ဒေါင်လိုက် Filter ကိုစာနယ်ဇင်း > ပန်းကန်များနှင့်ဘောင် filter ကိုစာနယ်ဇင်း
 ပန်းကန်များနှင့်ဘောင် filter ကိုစာနယ်ဇင်း
အဆိုပါ filter ကိုပန်းကန်၏ပုံသဏ္ဍာန်အဓိကအားမီးခိုးရောင်သွန်းသံ, spheroidal ဖိုက်သွန်းသံ, သံမဏိအမာခံပြင်မုန့် soliton သို့မဟုတ်ဗဓေလသစ်, လူမီနီယံအလွိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာပလပ်စတစ်နှင့်အတူလှည့်လည်ခြင်းနှင့်စတုရန်းနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ filter ကိုပန်းကန်၏နှစ်ဖက်အလယ်မှာခွက်ထဲကနေ protruded နှင့်ပျော့ဖတ်ဝင်ပေါက်အဖြစ်အလယ်ဗဟိုမှာ 14 တွင်းရှိကြ၏။ အဆိုပါခွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အများအပြားတုတ်ကျင်းရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကား groove transverse ရေနုတ်မြောင်းဟုခေါ်ကြသည်။ အဆိုပါရေနုတ်မြောင်းချန်နယ် filter ကိုပန်းကန်၏အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်မှာ filter ကိုထွက်ပေါက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေသည်။ အဆိုပါယိုစီးမှု၏ပုံသဏ္ဍာန် centripetal, လိမ်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်ဇယားကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သွန်းသံသို့မဟုတ်လူမီနီယံအလွိုင်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့တစ်ဦးက turbid ပန်းကန်အဆိုပါ filter ကိုပန်းကန်အခြမ်းများ၏အနားကွပ်အပေါ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပိတျထားသောတစ်ခု annular groove ရှိပါတယ်, ပြီးရော်ဘာ grommet အဆိုပါ groove အတွက် embedded ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမတံဆိပ်ခတ်သလဲအင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်၏ filter ကိုပန်းကန်၏အနားကွပ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ အဆိုပါလူမီနီယံဆန်ခါပန်းကန်နှင့် filter ကိုအထည်အဆိုပါ filter ကိုပန်းကန်၏နှစ်ဖက်အဖြစ်အသုံးပြုနေကြသည်ကို၎င်း, ကြေးနီဆွန်းသော့ခလောက်ဟာအစာကျွေးခြင်းဝင်ပေါက်အပေါ်ရောက်သည်နေကြသည်။
အဆိုပါရွှေ့ပြောင်းခေါင်မိုးနှင့် fixed ခေါင်မိုးအမှန်တကယ်လည်းရွှေ့ပြောင်းပလပ်များနှင့်ပုံသေပလပ်ဟုခေါ်တွင်တဦးတည်း-လမ်း filter ကိုပြား, ညီမျှကြသည်။ အဆိုပါ fixed ခေါင်မိုး၏ဗဟိုတစ်ဦးပျော့ဖတ်ဝင်ပေါက်ရှိပါတယ်, နှင့်ပိုက်အဆိုပါ slurry စုပ်စက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်နေသည်။ အဆိုပါရွှေ့ပြောင်းခေါင်မိုး၏ဗဟိုအဘယ်သူမျှမပေါက်တွေရှိပါတယ်, နှင့်တိုက်ရိုက် Compact ကိရိယာ၏အင်အားဖြင့်သမုတ်သော။
အဆိုပါ crossbeam အားလုံး filter ကိုပန်းကန်နှင့်ဂယက်ထ၏အလေးချိန်ကိုထောကျပံ့ဖို့အသုံးပြု, ထိုသို့နှိပ်ပြီး filtering ကို၏ဆွဲအင်အားစုကိုထမ်းဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းသတ္တိ, မာကျောမှုရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လေဆာရောင်ခြည်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းကွက်နှင့်စတုဂံနှစ်မျိုးရှိပါတယ်, နှင့်စတုဂံအပိုင်း၏ကွေးကျောမှု သာ. ကောင်း၏, ပို. ပို. ကျယ်ပြန့်အသုံးချခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
အဆိုပါ filter ကိုစာနယ်ဇင်း operated အခါ filter ကိုအထည်နှင့်အတူ install လုပ် filter ကိုပန်းကန်ပထမနှင့်ထို့နောက်ချုံ့ device ကိုအားဖြင့်ဖိအဆိုပါထိန်သိမ်း၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ရောင်ခြည်ပေါ်ချထားပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်တစ်ဦး filter ကိုအခန်းထဲကရှိသမျှနှစ်ခု filter ကိုပန်းကန်အကြားဖွဲ့စည်းသည်။ အဆိုပါလှုံ့ဆျောအတွက် filter ခနျးထဲသို့ pumped ထို့နောက် fixed ခေါင်မိုး၏ဝင်ပေါက်ပြီးနောက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် filter အခန်းထဲကထဲသို့ဝင်သည်။ ဖိအားလက်အောက်တွင် filtrate filtrate အထည်, ဆန်ခါပန်းကန်နှင့် filter ကိုပန်းကန်ပေါ်ရေနုတ်မြောင်းကျင်းမှတဆင့်ထုတ် filtered ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုင်အခဲပစ္စည်းများ filter ကိုအထည်များပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် Shen အခန်းထဲကအပေါ် filter ကိုကိတ်မုန့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အဆိုပါ filter ကိုအခန်းထဲက filter ကိုကိတ်မုန့်နှင့်ပြည့်စုံသည်နှင့်အ filtrate အလွန်နှေးကွေးစွာထွက်စီးဆင်းနေသည်, ပျော့ဖတ်ရပ်တန့်နိုင်ပါက, slurry ဖယ်ရှားတဲ့အခါ, filter ကိုပန်းကန်ဖြေလျော့နေသည်, ထို pancake ဖယ်ရှား, ပြီးတော့ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ filtration ဖြစ်စဉ်ကိုအတွင်း filtrate ထွက်ပေါက်ကနေ filtrate မိုးအုံ့ဖြစ်တွေ့ရှိလျှင်က filter ကို၏ထွက်ပေါက်ကောင်းကောင်း install လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးမဟုတ်ကြောင်းညွှန်ပြနေသည်, နှင့် slurry ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားရန်အဖြစ်ဒါကြောင့်ထွက်ပေါက်ကိုပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဟော့ပြား Filter ကိုစာနယ်ဇင်း , မြင့်မားသောစွမ်းရည်စက်မှု Filter ကိုစာနယ်ဇင်း , အရည်အစိုင်အခဲခြား , မြင့်မားသောစွမ်းရည် Filter ကိုစာနယ်ဇင်း , မြင့်မားသောစွမ်းရည် Air ကိုကောက်ခံရေး , မြင့်မားသောစွမ်းရည်မှုန် Air ကို Filter ကို , စက်မှုအထက်တန်းအသုံး Filter ကိုစာနယ်ဇင်း , အလိုအလျောက်ခါးပတ် Filter ကိုစာနယ်ဇင်း